Yasekwa ngonyaka ka-Apreli 2008, inkampani yethu uzinikele ekuphuhliseni ukusetyenziswa kwizikhundla zemveliso carbon ifayibha products.Two kwizinga eliphezulu avuleka nophuhliso inkqubo zokomba, ukubumba, CNC processing.
Factory liya Gaobu Town, Dongguan, Guangdong kulo nyaka, indawo yemveliso zafikelela 2500 yezikwere, ngaphezulu kwama-10 ngqo izixhobo isixhobo kunye iinjineli ezaneleyo zamagcisa zongezwa ukuphucula inkqubo. Ukuza kuthi ga ngoku, kukho imigca imveliso elikhulu-isikali 4 kuquka ifayibha sheet carbon, carbon ifayibha tube, CNC processing kunye nemisebenzi yezandla.
imveliso bethu ovunyelwe ISO-9001-2008 kwezatifiketi inkqubo loMgangatho, umgangatho imveliso iye yaphuculwa, izinga elihle zafikelela 99%.
Siye saya 13 Shanghai International Model Exhibition, kwaye bazukiswa isihloko 2015 TOP 10 amashishini yonyaka ezaziwayo-kakuhle.